RASMI: Jürgen Klopp Oo Xaqiijiyay In Xidigaha Kooxdiisa Koobka Aduunka Ka Soo Ciyaaray Ee Mohamed Salah & Sadio Mane Ay Qayb Ka Yihiin Safarkooda Maraykanka Ee Koobka ICC Cupka. – Laacib.net
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay in xidigo kooxdiisa ka tirsan oo koobka aduunka ka soo ciyaaray ay qayb ka noqon doonaan safarka ay ugu baxayaan dalka Maraykanka halkaas oo ay kaga qayb galayaan koobka saaxiibtinimo ee International Champions Cupka.
Liverpool ayaa kulamo xiiso badan la ciyaari doonta kooxo waa wayn oo Yurub ka tirsan inta ay joogto dalka Maraykanka iyada oo markale ka soo muuqan doonta koobka xagaaga kasta la ciyaaro ee International Champions Cup waxaana kulamadan fursad u heli kara Mohamed Salah iyo Sadio Mane.
Jürgen Klopp ayaa cadeeyay in Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Marko Grujic oo dhamaantood koobka aduunka ka soo qayb galay ay kooxdiisa kula midoobi doonaan USA isaga oo sheegay in ay hubin doonaan xaaladooda haddii ay ciyaari karaan kulamada ICC Cupka.
Liverpool ayaa ICC Cupka la ciyaari doonta Borussia Dortmund kulankan oo ka dhici doona Charlotte laakiin waxaa ugu xigi doona kooxda ay xili ciyaareedkii hore dhibta badan isla soo mareen ee Manchester City kulan ka dhici doona East Rutherford balse Klopp ayaa ka hor iman doona Jose Mourinho kooxdiisa Manchester United kulan loogu badalsan yahay Ann Arbor.
Markii Klopp wax laga waydiiyay haddii Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Marko Grujic ay qayb ka yihiin kooxdiisa u safraysa USA ayaa ku jaawaabay: “Kaas ayaa bilaw u noqon doona iyaga. Fasaxoodii way qaateen kadib waxay anaga noogu iman doonaan USA. Waxay qaateen saddex usbuuc oo kaliya oo fasax ah, sidaa daraadeed, waxay la micno tahay in ayna wax badan luminayn”.
Klopp oo ka hadlaya xaalada taam ahaansho ee ay xidigahani ku ciyaari karaan kulamada ICC Cupka ee USA ayaa yidhi: ” Waxaa waajib nagu ah in aanu aragno sida ay noqdaan, kadib waxaanu arki doonaa haddii ay kulamada ciyaari karaan. Halkaas ayay joogi doonaan, kadib kooxda ugu danbaysa(ee ciyaartoyda koobka aduunku) waqti aad uga danbeeya ayay iman doonaan”.
Dhamaan xidigaha uu Klopp sheegay in ay safarkooda US ku wehelin doonaan ee Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Marko Grujic ayay xulkoodu ku soo hadheen heerkii groupyada koobka aduunka laakiin xidigihii kale ee koobka aduunka kaga danbeeyay ayaan hadda soo laaban doonin.